Wednesday December 13, 2017 - 20:52:29 in Wararka by Super Admin
Kulanka oo ahaa mid uu gogoshiisa dhigay R/wasaaraha Turkiga ayaa lagu gorfeynayay go’aankii isbuucii lasoo dhaafay kasoo baxay madaxweynaha Mareykanka Donald Trump kaasi oo magaalada Qudus u aqoonsaday caasimadda Yahuuda.
Kulanka waxaa xaadir ku ahaa Hoggaamiyaal ka badan 40 oo ka socday dowladaha Carabta iyo kuwa kale ee caalamka islaamka katirsan.
Madaxweynaha Turkiga oo furitaankii shirka Khudbad ka Jeediyay ayaa weerar dhanka Afka ah ku qaaday Mareykanka iyo Yahuudda oo uu sheegay in ay taageeraan wax uu ugu yeeray ‘Argagaxisada’, Erdogaan oo caan ah jeedinta hadallo uu taageero uga raadsanayo shucuubta muslimka ayaa ku baaqay in lataageero shacabka Filisdiin balse kuma baaqin in ciidamo melleteri ah loo diro Qudus si ay u xureeyaan.
Hoggaamiyaasha dowladaha dabadhilifyada ah ee kajira caalamka islaamka ayaa gaba gabadii sidii looga bartay soo saaray bayaan ku eg Cambaareyn iyo Eeday iyagoo Q.Midoobe ka codsaday in ay soo saarto qaraar ay ku diidayso go’aanki Trump halka Mareykanka ay ugu baaqeen in uu ka laabto go’aankii dhigayay in Qudus tahay caasimadda waxa loogu yeero Israa’iil.
Arrinta khaladka weyn ah ee ay isku raaceen hoggaamiyaasha kulmay ayaa ah in ay caasimadda Filasdiin u aqoonsadeen Qudusta Bari taas oo macnaheedu yahay in inta kale ee magaaladaasi ay u aqoonsanyihiin caasimadda Yahuudda!.
intii uu kulanku socday majirin Hal hoggaamiye oo soo jeediyay in ciidamo la aruuriyo oo Yahuudda lala dagaallamo xataa majirin Hoggaamiye yiri "aan xiriirka ujarno Yahuudda oo aan Erinno safiiradeeda”.
Kulankii Istanbuul ayaa galay Khaanada kulamadii ay yeelan jireen hoggaamiyaasha carbeed iyo kuwa Cajamta ee biya dhicoodu ahaa "halloo hoggaansamo sharciyadda caalamiga ah, Israa’iilna ha ilaaliso sharciga Q.Midoobe”, iyadoo aanay cid umaqan muslimiinta Filasdiin oo aan allaah ka aheyn.